Kungani abantu glycine?
Glycine kuyinto acid acid, omunye engu-20 esetshenziswa ukwenza namaprotheni emzimbeni womuntu. Umzimba ukhiqiza ke ngokwemvelo.
Glycine liyatholakala nasemiBhalweni ukudla kakhulu wamaprotheni amaningi ezifana :
Kulinganiselwa ukuthi sithola mayelana 2 amagremu glycine ngosuku ezivela emithonjeni ukudla. Njengoba ibhekwa, ukuthi kuthathwe imali kakhulu kunalokhu
Glycine usetshenziswa eziningi ezihlongozwayo. Bayingcosana labo ukusetshenziswa uphakamise ube ubufakazi obanele emuva ngokugcwele ukusebenza glycine sika.
Glycine uye wasibonisa isithembiso kakhulu njengengxenye uhlelo ukwelashwa sokuphazamiseka kwengqondo. Ngo izifundo eziningana, glycine ithuthukise ukusebenza kwezinye izidakamizwa bayasangana lapho ezithathwe ngemithamo ziyashiyana kusukela 15 amagremu kuya ku-60 grams ngosuku. Nokho, glycine kungase kube nomphumela omubi lapho abhanqiwe ne antipsychotic izidakamizwa clozapine.
Ucwaningo encane kusikisela ukuthi glycine kungasiza abantu sikashukela sohlobo 2 ukulawula azo kashukela ephezulu. Kodwa ucwaningo kudingeka okwengeziwe ukuze isipele ukuthi umphumela.
Ocwaningweni olukhudlwana, kwafakwa isilinganiso esincane semithi glycine (1 2 amagremu ziyoncibilika ngaphansi kolimi) yabonisa lungaba nokukhawulela ukulimala kobuchopho okubangelwa unhlangothi ischemic uma ukwelashwa iqala emahoreni ambalwa yisifo sohlangothi. Kukhona ezinye ukukhathazeka, Nokho, ukuthi ebulilini glycine engenza umonakalo odalwe unhlangothi sibi kakhulu.
Ucwaningo kwenziwa izilwane isu at ezingaba glycine sika njengenhlangano agent anticancer. Kodwa abukho ubufakazi kodwa ukuthi bangasiza zokuvimbela noma zokwelapha umdlavuza kubantu. I Kungashiwo okufanayo ngekhono layo ukuvikela isibindi kanye nezinso kusuka umonakalo obangelwa amakhemikhali ezinjengokusebenzisa kabi uphuzo oludakayo.
Emilenzeni, okungase kubangelwe kahle kwegazi, isifo sikashukela, ukungasebenzi kwezinso, kanye nezinye izinkinga zempilo, ikhombise umehluko ezinye emva kokwelashwa nge ukhilimu equkethe glycine nezinye amino acid.
Enye inhlolo-vo yabonisa kuwenta ncono ngalokulingene kumemori phakathi zinsizwa oseqinile. Kodwa imiphumela kufanele sigcizelelwe ucwaningo olwengeziwe.
Glycine nalo ikhambi elitholakalayo ngoba zaziziningi kulokunye, naphezu yokuntuleka ubufakazi besayensi ukuthi kuyaphumelela noma iphephile phi of them. Ngokwesibonelo, glycine is imakethwa njengendlela:
Nyusa ukuphulukiswa imisipha abasebenza ngokweqile nabacindezeleke noma ezilimele.
Soothe i yisisu.
Nyusa ezolile futhi aziphumulele.
Lithuthukisa isimiso somzimba sokuzivikela.
Khulisa ozokusebenzisa womuntu.
Nalapha futhi, abukho ubufakazi okunokwethenjelwa ukuthi lusebenza ukusetshenziswa okunjalo.
Kahle kakhulu ezintweni ezikhipha ezakhelwe glycine ungazange ahlelelwe yimuphi umbandela. Futhi, njengoba ne amaphilisi ngokuvamile, izinga izithako ezisebenzayo emikhiqizweni eziqukethe glycine kuhluka umenzi ukuba umenzi.
Ungakwazi yini ukuthola glycine ekudleni?
Ukudla kakhulu wamaprotheni amaningi ukunikeza nengcosana glycine. Kodwa Izithako ziyadingeka ukuze uthole glycine ebulilini.
Ziyini izingozi ngokungaziniki glycine?
Glycine libonakala ziphephile, ngisho e-ngemithamo njengoba eliphezulu 60 amagremu ngosuku. Kodwa ukuphepha glycine sika engakaze ihlolwe ngokugcwele noma wafunda. Ngokuqapha ethile Kufanele siqaphelisise lapho ucabangela glycine izingane ezincane, kwabesifazane abakhulelwe noma abancelisayo, nabantu isibindi noma sezinso.
Abantu ukuphathwa clozapine kufanele agweme ukuthatha glycine. Futhi abantu abaye ngaba nesifo sohlangothi akufanele bathathe glycine ngaphandle kokuqondisa udokotela.
Abantu abayidlanzana babike isicanucanu, ukuhlanza, futhi yisisu ngemva kokuthatha glycine. Imibiko enjalo baye ezingavamile, futhi izimpawu Basukile lapha ngemva glycine wayekwa.
Ikheli: No.42 Xisanzhuang emgwaqweni, Shijiazhuang, Hebei, China